भाउजु सुनिता र देवरको एउटै सारीको फेरमा लाश, कारण खुल्दा झनै चकित ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भाउजु सुनिता र देवरको एउटै सारीको फेरमा लाश, कारण खुल्दा झनै चकित !
परिवारले लामो समयसम्म ढोका नखुलेपछि आफैं खोले, तब दुबै लाश साडीमा घुमटिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए । प्रहरीका अनुसार लामो समयदेखि उनीहरुबीच देवर र भाउजुको सम्बन्ध नभई अरुथोक नै चलिरहेको थियो । उनीहरुबीच श्रीमान र श्रीमतीको जस्तो सम्बन्ध रहँदै आएको खुलेको छ ।
जेसीबी चालक हरिओम बान्द्रामा छन् । हरिओम कामका कारण प्रायः बान्द्रामा हुन्छन् । विवाह भएको केही दिन पछि सुनिता र २२ वर्षीय देवर राममिलन र सुनीताबीच नाजायज सम्बन्ध कायम भएको थियो । त्यसपछि तिनीहरूले एक अर्कालाई मनपराउन थालेको बताइएको छ । घरमा दाई नभएको मौकामा राममिलन र श्रीमान नभएको मौकामा सुनीता एक अर्काको इच्छा पुरा गर्दै आएका थिए भनिएको छ ।
यो कुरा परिवारका सदस्यहरूलाई पनि जानकारी भइसकेको थियो । अवस्था नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने लगभग पक्काजस्तै देखिएको थियो । हरिओमलाई जानकारी नदिएर परिवारका अन्य सदस्यहरुले रामामिलनको विवाह गर्दिने कुरामा विचार गर्न थालेका थिए ।,,,भिडियो हेर्न तला क्लिक गर्नुहोला,,,
राममिलानको विवाह मिति ७ मे, २०२० असोदर प्रहरी चौकी क्षेत्रको गाउँमा गर्ने कुरा पक्कापक्की भैसकेको थियो । त्यसबेलादेखि अलग हुने डरले देवर र भाउजु दुःखी हुन थालेका थिए । परिवारका सदस्यहरूले भने कि राममिलन मंगलबार राति बुबाको साथ आमन्त्रित गरेर फर्केका थिए ।
दिनभरीको काम सक्काएर सबै सुत्न गए । सुनिताका तीन वर्षीय छोरा हर्ष हजुरआमा बलियासँग सुतिरहेका थिए । सुनिता दोस्रो तीन महिनाकी छोरी क्रान्तिसँग कोठामा सुतिन् । सुनिता मंगलबार बिहान कोठाबाट बाहिर निस्किइनन् । कोठाबाट बालिका चिच्याईरहेको आवाज आयो र सुनीतासँगै राममिलनलाई पनि परिवारका सदस्यहरुले देख्न सकेनन् ।
सुनिताको शरीर साडीको एक छेउमा थियो भने अर्को छेउमा रामामिलनको लाश थियो । सुनिताको अनुहार रामामिलानको छातीमा थियो । एउटा खुट्टा सुनिताको खाटमा फसेको थियो र अर्को खुट्टा खाटमुनि थियो । फोरेन्सिक टोलीले पनि अनुसन्धान गरेको छ ।
जाफरगंजका सीओ सञ्जय शर्मा र एसओ कमलेश पाल घटनास्थल पुगेका थिए । एएसपी राजेश कुमारले भने कि दुवै जनालाई चेतावनी दिइएको थियो । राममिलनका बुबा शिवबरनले प्रेम प्रसंगको कारण जीवन विसाउन गर्ने प्रयास भनेका छन् । यसमा कसैले कसैलाई पनि आरोप लगाएको छैन ,,,भिडियो हेर्न तला क्लिक गर्नुहोला,,,
मध्यरातमा झापामा यस्तो दर्दनाक घxटxना
अब हामी उठ्नु पर्छ : देश प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको निजी सम्पत्ति होइन : डा. गोविन्द केसी
श्रीमान वितेको केही बर्ष नपुग्दै परपुरुषसँग राज्यमन्त्री बिमला, प्रहरीले पक्रियो